Koorsada Shahaadada CCNP - Tusaha Fulinta
Tilmaamaha Hagaha Katalinta ee CCNP
Maxay fikrad wanaagsan u tahay mid ka mid ah inuu barto CCNP?
Maxay tahay sababta CCNA loogu baahan yahay aqoonsiga CCNP?
Gargaarka Sharciga CCNP
Cisco Certified Network Professional (CCNP) waa shahaadada laga ruqseeyey ee Cisco. Waxay si ballaaran u beddeshay shahaadada aasaasiga ah ee aduunka oo dhan iyada oo la tixraacayo maamulka qaabdhismeedka. Isagoo ka soo qaadaya caddayntan ayaa rajo ka qabtaa inuu soo jiidan karo isbeddelkiisa nidaamka nidaamka nidaamka iyo inuu noqdo mid uqalma inuu ka shaqeeyo ururinta khabiirada kuwaas oo wax ka qaban kara arimaha dhibaatada ee maamulka nidaamka. Rajada waa inay ahaataa CCNA R & S aqoon u leh si ay ula kulmaan tababarkan shahaadadan, iyo ka qaybgalka sanadka ee 1 ee nidaamka nidaamyada ayaa noqon doona aragtiyo dheeraad ah.
Haddii aad dooneyso inaad isku xirto, CCNP-CCNA waa marxal wanaagsan oo aad ku baran karto qabanqaabinta. Waxay ufiican tahay khabiirada IT-da iyo naqshadeeyayaasha heerarka marin-doonka ah ee doonaya inay xirfadahooda ka dhigaan maareynta nidaamka. (CCNP) Shahaadada Hagaajinta iyo Beddelidda waxay ansixineysaa awoodda ay u qabanqaabinayaan, dejinayaan, xaqiijinayaan, ayna baari doonaan nidaamka hirgelinta degaannada iyo meelaha ballaadhan, waxayna si wadajir ah ugala shaqeeyaan khabiiro ku takhasusa hababka amniga. Koorsada CCNP waxay u qalantaa kuwa aan lahayn wax ka yar hal sano oo ka mid ah maamulka nidaamyada nidaamsan kuwaas oo loo sameeyay si ay u kiciyaan dabacsanaantooda iyo inay si buuxda ugu shaqeeyaan nidaamka nidaamka adag.
CCNA waxaa ku jira fikradaha aasaasiga ah ee qaabka maamulka. Waa inaad ka ogaataa qaybaha aasaasiga ah ee nidaamka nidaamka ka hor inta aanad ku dadaalin Imtixaanka aqoonsiga CCNP. Ka dib kooras tababar ah oo CCNP ah, waxaad awood u yeelan doontaa inaad qabato shaqooyin kala duwan, tusaale, qorsheyn, soo bandhigid iyo baadhitaan WAN iyo LAN.
Koorsada CCNP waxay ansixin kartaa awoodda fahamka ah ee fulinta, diyaarinta, hubinta iyo baaritaanka arrimaha ku saabsan nidaamka gobolka iyo meelaha ballaaran. Si loo sameeyo koorsadan, waxaa lagama maarmaan ah in aan wax ka yareynin waqtiga maamulka nidaamka. Shakhsiyaadka ku dhammeeya kooraskan waxay iminka muujinayaan awooddooda ay ku buuxinayaan shaqaale xirfadeysan, injineernimo ballaaran, qabanqaabiyaan xirfadlayaasha iyo injineernimada nidaamka.
Tabobarku wuxuu ku habboon yahay Takhasusayaasha Network, Engineayaasha Nidaamka, Maamulayaasha Iskudaytka, Takhasusaha Taageerada Network, Naqshadayaasha Nidaamka, Maamulayaasha Nidaamka, Nidaamka Isdhexgalka iyo La-taliyeyaasha Shabakadda. Ka hor intaanan sameynin koorsadan, fahamku waxay u baahan yihiin inay yaqaanaan Networking Technologies, CCNA iyo weliba waxay leeyihiin barashada aasaasiga ah ee nidaamka nidaamka. Barashada TCP / IP ayaa loo baahan yahay, iyo ka qaybgalka sanadka 1 ee nidaamka nidaamka ayaa noqon doona faa'iido dheeraad ah.
Haysashada shahaadada CCNP waxay hubaal tahay inay muujinayso heer darajo ah oo ku salaysan isdhexgalka iyo isdhexgalka, sida horay looga sheegay. Markaad shaqo raadsato macmiilkii ugu dambeeyey, qaabka isdhexgalka ee Cisco ayaa ka dhigaya jawaaban aan la dabooli karin. Waa ujeedo kasta iyo ujeedooyinka qasabka ah si loo helo shahaadada si ay ula shaqeeyaan qalabixiye ama Cisco. Mar labaad, waa xitaa khayraad hufan markaad la macaamilaysid macaamiisha ', sida caddaynta.
Shahaadada waxay ku lug leedahay tartamayaasha faa'iidada leh si loogu guuleysto nidaam maamuleed oo kobcaya. Waxyaabo badan, waxay ka dhigeysaa shaqeynta in la fidiyo barashada qaabdhismeedka qaabdhismeedka aduunka oo dhan.
Shahaadadani waxay sidoo kale kugula wareegi doontaa si aad u heshid nidaam ka fiican marka loo eego mushaharka si laguu siiyo sida takhasusle. Waxay sidoo kale kaa caawin doontaa fikradaha maamulka qaabdhismeedka qaabdhismeed ee ururo kala duwan loo sameeyo si loo bixiyo. Waxaad sidoo kale aadi kartaa mile dheeraad ah oo aad qaadato imtixaan shahaadad oo lagu xoojinayo inaad ku maamusho codka iyo xogta qayb kasta oo telecom ah.
Halkaa, waxaa jira hubin nidaamyo nidaamyo nidaamsan oo lagu barto fahamka, tusaale ahaan, soo bandhigida, qabanqaabinta, fulinta iyo baaritaanka nidaamyada nidaamyada kala duwan ee maamulka khuseeya LAN iyo WANs.
Ku darida hal qadarin dheeraad ah ee nidaamkan la xaqiijiyay ee nidaamkan waa CCNP amniga, taas oo weliba ah laf-dhabarka amar-bixinta ee Cisco waxay xaqiijisay in ay diyaariso aqoon fiican. Shakhsiyaadka raadinaya barnaamijkan nabadgelyada ayaa ogaanaya in badan oo ka mid ah shaqooyinka furitaanka suuqa. Marka laga reebo taas, CCNP Voice waxa weheliya qayb ka mid ah koorsada guud ee koorsada guud kaas oo sidoo kale soo jiitay tirada guud ee shakhsiyaadka ku jira meeraha.
CCNP R & S waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee raadinta shahaadooyinka maamulka nidaamka nidaamkaas maalmahaas. Macluumaadka ilaa heerka fasaxa ah iyo oggolaanshaha khibradda la soo qaaday ayaa lagama maarmaan u ah soo bandhigida tartiib tartiib tartiib ah.
Hadda, marka ammaanka internetku yahay waxyaabaha ugu adkaa ee lagu hayo, helitaanka shahaadada ee barashada isbarbardhigga ayaa keena talaalo badan iyo natiijooyin la taaban karo. Rajada ugu horeysa waa mid ammaan ah. Markaad heshid shahaadadan, waxaad u rogi kartaa xirfad nabadgelyo internet ah oo ka caawin karta madaxda ganacsatada, shakhsiyaadka, asaasiga iyo ururada khatarta xanaaqa sida barnaamijyada iyo caabuqyada.
In ka badan ama ka yar, lacagta caddaanka ah iyo dhammaystirka shaqada waa laba ujeedo oo ka dambeeya khubarada si ay u qaataan koorsadan. Marka ay rabaan in ay is-farsameeyaan nidaamka maamulka nidaamka, sidoo kale sidoo kale waa koorso qumman. Waxay ku qanacsan tahay in la ogaado sida koontoroolyada nidaamyada muhiimka ah ay u jiifsanayaan qofku. Ammaanka Webkani waa mid si khaas ah loo daboolay kaas oo ah baahi weyn oo khibrad leh.
Solutions Technologies Innovative waa bixiye aad u fiican oo ah koorsooyin tababbar ah oo loogu talagalay ururada. Tababarka weyn ee nidaamka nidaamka ayaa u oggolaanaya khabiirada inay kordhiyaan dhammaan macluumaadka iyo dabacsanaanta muhiim u ah macaamiisha soo jiidashada leh.